Horudhac: Chelsea vs Everton… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ka dhacaya garoonka Stamford Bridge) – Gool FM
Haaruun March 8, 2021
(London) 08 Maarso 2021. Mid ka mid ah kulammada adag ee wareega ugu dambeeya kulamada Premier League ayaa ka dhici doona caawa garoonka Stamford Bridge, iyadoo Chelsea ay ku soo dhaweyn doonto Everton caasimadda England.
Chelsea ayaa haatan ku jirta kaalinta afaraad ee kala sarreynta horyaalka Premier League, iyadoo hal dhibic ka sarreysa kooxda kaalinta shanaad ee Everton, laakiin Toffees ayaa kulan gacanta ku haysata kana sare mari karta kooxda Thomas Tuchel.
Labadan kooxood ayaa u dagaallamaya inay ku dhammeystaan booska loogu soo baxo tartanka UEFA Champions League xilli ciyaareedka soo socda.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 9:00 Habeennimo xilliga geeska Afrika.
Daafaca dhexe ee Chelsea, Thiago Silva ayaa ku dhow inuu soo laabto kaddib markii uu seegay toddobadii kulan ee ugu danbeeyay dhaawac bowdada ah awgii, waana la qiimeyn doonaa xaaladdiisa.
The Blues ayaa sii wadi doonta la socoshada xaaladda weeraryahankeeda Tammy Abraham, kaasoo dhaawac yar qabay, isla markaana aan ku lug lahayn kulankii Liverpool ee Khamiistii.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Everton, James Rodriguez ayaa shaki uu ku jiraa sababo la xiriira dhibaato kubka ah.
Tom Davies iyo Seamus Coleman ayaa sidoo kale u baahan doona in la qiimeeyo, halka Yerry Mina iyo Fabian Delph ay sii joogteyn doonaan maqnaanshahooda dhaawac.
>- Chelsea ayaa guuldarro la’aan ah 25-keedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League oo ay garoonkeeda ku soo dhoweysay naadiga Everton, waxa ay guuleysatay 14 ka mid ah kulammadaas.
>- Kooxda reer London ayaa guuldarro la kulantay saddex ka mid ah afarteedii kulan ee ugu dambeeyey ciyaaraha sare ee horyaalka oo ay wajahday Toffees, waana guuldarrooyin ka badan 15 kii kulan ee markaas ka hor ay la ciyaartay.
>- Everton ayaa eegeysa inay dhammaystirto inay minin iyo marti u garaacdo horyaalka kooxda Chelsea tan iyo xilli ciyaareedkii 1978-79.
>- The Blues ayaa guuldarro la’aan ah (unbeaten) dhammaan 10-keedii kulan ee horyaalka iyo koobabba ay ka hoos ciyaartay tababare Thomas Tuchel, waxaana ay guuleysteen todobo ka mid ah kulammadaas.
>-Chelsea ayaa kasbatay 18 dhibcood oo horyaalka Premier League ah tan iyo kulankii ugu horreeyay ee Tuchel, wadarta guudna waxaa ka sarreeya oo kaliya Manchester City muddadaas.
>- Kooxda reer London ayaa shabaqeeda gool ka ilaashan karta shan kulan oo isku xigta oo Premier League ah markii ugu horraysay tan iyo markii ay sidan oo kale sameeyeen intii u dhexeysay November 2014 iyo Janaayo 2015.
>- Tababare Thomas Tuchel ayaa noqon kara tababarihii ugu horreeyay ee taariikhda Premier League ee arka kooxdiisa oo shabaqa ilaashatay mid kasta oo ka mid ah shantii kulan ee ugu horreeyay oo uu ku ciyaaray garoonka kooxdiisa tartankan.
>- Edouard Mendy ayaa shabaqa ilaashaday 12 kulan oo ka mid ah 22 kulan oo Premier League ah oo uu ku soo bilowday safka hore, 210 goolhaye oo ugu yaraan 10 kulan ku soo bilaabay safka hore ee tartanka, waa midka kaliya ee shabaqiisa ilaashanaya in ka badan kala bar.
>- Everton ayaa u tartamaysa guusheedii 10-aad ee Premier League oo ay ku soo gaaraan meel ka baxsan garoonkooda xilli ciyaareedkan, taasoo noqon doonta rikoor cusub oo kooxda ah.
>- Markii ugu dambeysay ee ay guuleystaan 10 kulan oo ay ku ciyaareen meel ka baxsan garoonkooda hal xilli ciyaareed gudihiis waxa uu ahaa fasal ciyaareedkii 1986-87, markii loo caleemo saaray horyaalnimada.
>- Kooxda Merseyside-ka ayaan laga badinin sagaal kulan oo horyaalka ah oo ay marti ahaayeen (7 kulan waa ay guuleysteen, halka labo kulan ay barbaro galeen), waana heerkoodii ugu dheeraa ee noocan oo kale ah tan iyo markii 10 kulan oo isku xigta oo ay marti ahaayeen aan laga adkaan intii u dhexeysay December 1984 iyo May 1985.
>- Toffees ayaa shabaqeeda gool ka ilaashan karta afar kulan oo isku xiga horyaalka Premier League markii ugu horreysay muddo 12 sanadood ah.
Kooxda Man United oo soo gabagabaysay guulihii xiriirka ahaa ee Man City kaddib markii ay ku soo garaacday garoonkeeda Etihad... + SAWIRRO
RASMI: Joan Laporta oo ku guuleystay xilka Madaxtinnimo ee Kooxda Barcelona... (Waa markii labaad oo loo caleemo saaro xilkaan)